TEEJAYX6 UYAKUFUNDISA UKUBA UNGAMENZA NJANI UMKHONYOVU - INQANABA
Teejayx6 Uyakufundisa ukuba Ungamenza njani umkhonyovu
UTeejayx6 uhlebela indlebe yomntu osafuna ukuqhekeza oswele isikhokelo: Ufuna i-ID engeyiyo. I-rapper eneminyaka eli-18 ubudala, osandula ukubulela intsholongwane kwiingoma zakhe zobukrelemnqa ezimalunga nobusela besazisi kunye nobuqhetseba bekhadi letyala, ubambe inkundla kwindibano yokuzibhengeza ngaphakathi kwivenkile yempahla yaseManhattan. Abakhwabanisi abanamava, abakhohlisi bexesha elizayo, kunye ne-scam-curious form bahamba ngocwangco phambi kwakhe-bonke bakwiingqondo, ngokungathi upopu sele eza kunika intsikelelo kwibhalkoni ye-St Peter's Basilica.
I-Teejay AirDrops izicwangciso zobuqhetseba kwabambalwa abakhethiweyo, kwaye batsala abanye bucala ukubanika ingcebiso yomntu ngamnye ukuba babhale ezantsi kwiifowuni zabo ngaphambi kokuba bashiye ngokukhawuleza ukubanjwa kweshishini. Omnye okwishumi elivisayo onxibe iti emnyama yeVlone, ephethe ii-iPhone 10s ezimbini ezintsha awazifumana ngokulandela iindlela zikaTeejay, u-gingerly uya kwi-rapper kwaye uthi, andizukuyifumana le sauce ngaphandle kwakho.
Ngaphandle kwendibano, umntu ubeka ibhegi ePhakamileyo ngomlilo ngaphandle kwesizathu. Njengoko ivumba lerabha elitshileyo liqala ukusasazeka, ifeni ehamba ngoSmack indixelela, ngokuqaqamba kwiso lakhe, iTeejayx6 iyayitshintsha imbono yobuqhetseba eMelika.
Kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo, iTeejayx6 ivele kwindawo yaseDetroit enabantu abaninzi njengakutshanje kwi nde umgca yabaqili besiXeko. Ukusetyenziswa kwakhe nzima kwesalathiso senkcubeko ye-pop kunye neenkcukacha ezinokubangela ukuba iindlela zakhe zibhenele kwisizukulwana esitsha sabemi bedijithali. I-chorus yendlela yakhe yokuphuma, iWebhu emnyama, eveliswe ngu-Detroit owayebetha uDamjonboi, ephindwe kabini njengesifundo esinokukhunjulwa: Urhulumente wazama ukundinqanda kwiwebhu emnyama / ndikhuphele i-Tor Browser emva koko ndabuya / ndaya ndafumana I-VPN. Vula Ulwaphulo uqhatha malunga nokuthenga iinombolo zokhuseleko loluntu; Inqaku letyala kubandakanya umgca, Ukunyusa abantu abangama-15 amanqaku okuthenga ngetyala, fumana izindlu ezili-15; kwaye uqhubeke Ukubambisa ade aziqhenye ngokuqhatha umakhulu wakhe.
Ngamanye amaxesha umculo wakhe usisiseko se-punchline-kwimarathon yakhe ukuya nobuya kunye nomnye u-rap rapher Kasher Quon, Dynamic Duo, kubalulekile -kwaye ngamanye amaxesha wenza amabali agqwethiweyo agqitha ngokungathi akukho bhajethi I-11 yeLwandlekazi ispinoffs. Swipe Story kukudlala-ngokudlala komdlalo weqonga lokuthenga iiTV kunye nee-Xbox ezivela kwiWalmart yendawo, egcwaliswe ngendlela-yevidiyo efotelweyo ngaphakathi kwenye yeendawo ezinkulu zokuthengisa. (Ukuthetha ngengoma, uTeejay uyancuma kwaye undixelele, ndifuna ukuxhaswa yiWalmart.)
Uninzi lwabantwana kwindibano bayazibona eTeejay: Bafuna nje ukuza kunyuka bhabhe, kwaye ubuqhetseba yindlela yabo yokwenza oko. I-Naysayers inokugxeka i-rapper ngokuqhelanisa nobuchwephesha obunje ngokungekho mthethweni, kodwa ukuqhatha yinkcubeko esele ikho kudala ngaphambi kokuba umrepha afike, kwaye iyakuba kukude emva kokuba i-hype esemva kwakhe isweleke. Kwaye ngenxa yokuba uninzi lolwaphulo-mthetho oluchaziweyo lubandakanya ukurhwaphiliza ezinye zeenkampani ezizezona zityebileyo eMhlabeni, unokubonwa njengenye yeRap Robin Hood yeminyaka ye-cryptocurrency.
UTeejay uyazazi ngokwaneleyo ukuba akhombe uburharha obumnyama kakhulu kuyo yonke loo nto. Abantu bafuna ukundibiza ngokuba ngumkhohlisi, undixelela emva kwendibano, ndizama ukwahlulahlula kwiintlobo zobuqhetseba ezingakumbi. Kodwa ndibanceda ngenene abalandeli, ndibanike iingcebiso, kunye nemali ukuba bayayifuna.
Ubomi bukaTeejay Witherspoon buqale ukutshintsha xa wafuduka kwikhaya likanina eDetroit e-Eastside ekuqaleni kwalo nyaka. Umama wam ungqongqo, utsho, ngelizwi elikhanyayo, elingenakuphikiswa. Ekuqaleni wayesithi andinakuzihlalela, kodwa ekugqibeleni waba ngopholileyo ngayo. Kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, ekhuthazwe ngumculo weAtlanta Indoda yeMali, wagqiba kwelokuba aqale ukubhala indlela yokuphila e-scammer kwiiraps zakhe. Abantu baseDetroit bebesenza, kodwa bebengena nkcukacha, u-Teejay ucacisa, esula i-lint engekhoyo kwijini yakhe kaMike Amiri kunye neeteki zeReversace Chain Reaction.
Ekupheleni kukaJulayi, umculo wakhe uthathe xa wakhupha ividiyo yeWebhu yeWebhu, embonisa edlwengula eluphahleni ngelixa echwetheza ilaptop. Kwiiveki ezimbini kamva, ngexesha lokudlala kwakhe okokuqala e-LA, Teejay wabanjwa eqongeni ngamadoda amabini enxibe iibhatyi zaseMelika zaseMelika. I-fiasco yahlula abalandeli: Abanye bakhala i-Teejay yasimahla ngelixa abanye bayibhala njengenye inkohliso, becacisa ukuba iibhatyi ezithandabuzekayo zabasemagunyeni kunye nendlela yokucoca isihlwele yabonakala njengendawo yemidlalo yeqonga. Ndicinga ukuba banendawo, uyavuma uTeejay, etsala ihempe yakhe ebusweni bakhe, ezama ukubamba ehleka.
Ukusukela kweso siganeko, umculo wakhe kunye namajelo eendaba ezentlalo-ahlaselwa ngabalandeli bemcela ukuba abasikelele ngeendlela ezintsha zobuqhetseba. UTeejay woyika udumo lwakhe olutsha. Ndine-fanbase yokwenyani yeeveki ezintathu, utsho. Ubomi be-scammer bunezinto ezithile ezisilelayo, nangona. Kwindlela yakhe yamva nje, apile , uyaqhekeza, andikwazi nokuba ndichebe iinwele akusekho sizathu sokuba ndenze ubuqhetseba beenwele zam. Njengoko sithetha nge-pluses kunye nemingxunya ye-scam rap kwi studio yaseMidtown, kuyaphawuleka ukuba iinwele zakhe zibukeka ngathi zenziwe ngemela yebhotolo.
Ifoto ngu-Shooter. Jimmy
I-Pitchfork: Ngaba ukhe ukhathazeke kukuba ukuqhekeza malunga nokuqhatha kukuzibeka ngokwakho?
Teejayx6: Ngamanye amaxesha ndiyoyika. Kodwa abanako ukuphina nto kum. Yonke into endiyidlwengulayo sele yenzekile, ngoko abanakundifumana ngento engekhoyo. Andisoze ndiyeke ukudlwengula ngaphandle kokuba ndanyanzelwa.
Ucinga ntoni ngabantu abaninzi abacinga ukuba ubuqhetseba abulunganga ngokuziphatha?
Abantu abaninzi bathi ubuqhetseba besazisi kunye ne-shit, kodwa ayisiyiyo kwaphela. [ ikhefu elide ] Yima, mhlawumbi kunjalo. [ uyahleka ] Kulungile, ndiyaqikelela ukuba ikhutshiwe, kodwa kunemali eninzi ekufuneka yenziwe kuyo.
Kutheni le nto uqale udlwengula malunga nokukhwabanisa?
Kwakukho abantu abaninzi ababeyenza inkohliso. Uyakwazi ukuxelela xa abantu bengangeni kwiinkcukacha ukuba abayiphili ngokwenyani. Nam, ungatsho ukuba ndiyiphila le nto. Ndiqale ukudlwengula kulo nyaka uphelileyo, kodwa umculo wam wokuqala ibingumgqomo kuba bendixoka ngokuthengisa iziyobisi kunye nezinto ebendingaphili ngazo.
IWebhu emnyama yeyona track yakho ithandwayo okwangoku. Ngaba unamava ngewebhu emnyama?
Ewe, ndinamava amaninzi. Ukuqala kwam ukuya apho bendineminyaka eyi-14 kwaye ndabona eyona nto ikhatywayo onokuyicinga. Inamathele kum.
Swayipha iSifundo, malunga nokuqhatha iWalmart, icace gca. Uhambe njani ngokwenza loo mzila?
Kule ngoma ndafumana ukubetha kwi-imeyile yam ndaza ndavula i-app yam yamanqaku ndathi, Makhe ndifunde esinye sezifundo zam zokwenyani. Khange ndicinge ukuba izakusebenza, kodwa eneneni iyenzile.
Eyona mixtapes yehip hop
Ulandelele njani umkhondo wakho kunye noKasher Quon, weDynamic Duo?
Oko kwenzekile nje kuba mna noKasher Quon siphose inqwelomoya kumdlalo, ke ndaya estudiyo ndaphambana nesihogo, kuba uMoya walibazisa ukubhabha kwethu. Kwaye oko kwaba ngumgca wokuqala. Sasihamba nje siye ngapha nangapha, sizama ukogqitha omnye nomnye kwaye senze amazwi ethu aphakeme kunomnye. Ndicinga ukuba kulapho ndifumene khona ukuhamba kwam.
Uthe wena noKasher Quon benifumana inqwelomoya ukuya kwenza umboniso. Ngaba ukhe ubonise eDetroit?
Andisoze, iyingozi kakhulu. Nokuba kukho umntu oza kundifunda andenzi njalo.
Ngaba umsebenzi wakho werap wenza ukuba uthathe umhlala-phantsi kubuqhetseba?
Kunzima apha phandle. UMichigan uqhekeza isazisi ezingezizo kunye namakhadi etyala. Kodwa mamela, ngomboniso okwangoku ndingafumana i-5, 000 yeedola-kwihlabathi elinobuqhetseba, ayisiyonto leyo.
Ngaba ynw melly ijele
Iqela labane libuyisa isipho
inkosi igizzard iplanethi b
Umphefumlo womfazi sharon jones
kukhanya kwaye oh kukhanya
Ii-albhamu ezilungileyo ze-70s